FIZAHANTANY SY NY FITATERANA: Antsoina ny mpandraharaha hampiasa vola | déliremadagascar
Socio-eco	 13 juillet 2019 lynda
Paikady iray ahafahan’i Madagasikara mankany amin’ny fisandratana ny fizahantany. Ny fanamboarana foto-drafitr’asa mifanaraka amin’ity sehatra ity no hitan’ny fitondram-panjakana ho laharam-pamehana. Nambaran’ny minisitry ny fitaterana, ny fizahantany ary ny famantarana ny toetr’andro, Randriamandranto Joël fa andry iray mampandroso ny toekarena ny fizahantany. Mba hanatrarana io tanjona io dia mifototra amin’ny paikady dimy ny minisitera: ny fametrahana tolotra isan-karazany, ny fampiroboroboana ny foto-drafitr’asa, ny fampandrosoana ny fizahantany manerana an’i Madagasikara, ny fampivoarana ny sehatry ny fitaterana ho fampandrosoana ny fizahantany ary ny “open sky”.
Noho izany, nanapa-kevitra ny eo anivon’ny fiadidian’ny repoblika sy ny ministeran’ny fitaterana, ny fizahantany ary ny famantarana ny toetr’andro fa amin’ny alalan’ny “Wave Madagascar” no hanafainganana ny fanatanterahana ireo vina ireo. Ny 17 ka hatramin’ny 20 septambra 2019 ny andiany voalohany amin’ity “forum international” natokana ho an’ny fizahantany sy ny fitaterana ity. Hizara roa ny fandaharam-potoana ka fihaonan’ireo mpandraharaha ara-toekarena misahana ny fandraisam-bahiny, fitaterana an’habakabaka, fitaterana an-dranomasina sy ny maro hafa amin’ireo mpamatsy vola, mpampiasa vola ary manana tetikasa ny 17 sy ny 18 septambra. Eny amin’ny CCI Ivato no hanatanterahana izany. Fitsidihana ireo toerana azo hanatanterahana ny tetikasa kosa 19 sy ny 20 septambra. Raha ny fanazavan’ny tale misahana ny fifandraisana iraisam-pirenena eo anivon’ny fiadidiana ny repoblika, Rama Ranja fa toe-javatra fanararaotra miisa 50 amin’ny lafiny fandraharahana no miandry ireo mpandray anjara mandritra ny « Wave Madagascar ».
ministeran'ny fizahantanywave madagascar
One comment on “FIZAHANTANY SY NY FITATERANA: Antsoina ny mpandraharaha hampiasa vola”
Pingback: FIZAHANTANY SY NY FITATERANA: Antsoina ny mpandraharaha hampiasa vola - ewa.mg